Umxhubi we-BB wesichumisi (umgca wemveliso yezichumisi oxubeneyo) eveliswe yinkampani yethu yamkela iziphumo ezilungileyo nezingalunganga, ukuxuba kunye nokukhupha izixhobo kusetyenziswa isixhobo esikhethekileyo sendawo yokujija kunye nolwakhiwo olwahluke-ntathu. Izixhobo zinoveli kuyilo kwaye zinamandla okusebenza. Inkqubo yayo yokondla ayizigcini izinto. Inkqubo yokuxuba ilinganiswe ngokulinganayo, kwaye inkqubo yolawulo ye-elektroniki, incwadana yemigaqo, ezenzekelayo, kunye nekhompawundi ziimpawu ezingenazo iimveliso zayo ezifanayo. Isixhobo sokuxhuba isichumisi se-BB sineempawu zexabiso eliphantsi, indawo encinci, imveliso enkulu, kunye nokuxubana okufanayo.
Powder ezifana ammonium sulphate, ammonium nitrate, ammonium chloride, urea, potassium sulphate, potassium chloride, ammonium phosphate njalo njalo.
Igranules Bulk Ukudibanisa isityalo kuyinto eqhelekileyo, izixhobo zayo ziikhemikhali ezigreyityi granules, igrisi yesichumisi edibeneyo kunye negrisi yezichumiso zezimbiwa njl.
Izondlo zizonke azikho ngaphantsi kwe-35.0%. Ipesenti ye-phosphorus e-soluble yamanzi efumaneka kwi-phosphorus ekhoyo, umxholo wokufuma kunye nobungakanani bamasuntswana (2.00mm ～ 4.00mm) zezi: zingekho ngaphantsi kwe-60%, hayi ngaphezulu kwe-2.0% kwaye ingekho ngaphantsi kwe-70%.
Umxube wemveliso yokwenza isichumiso ngobuninzi kulula kwaye kutyalo-mali olusezantsi. Inoyilo olwahlukileyo kunye nezixhobo, inokuba ngumatshini wokuvelisa iimoto ezizenzekelayo kunye nomgca wokuvelisa okuzenzekelayo.
1. inkqubo lokondla nomthamo
2. Umxube we-BB okanye i-blender
ISICWANGCISO SOKUGQIBELA SE-NPK BB GRANULES SOKUTYALA
Umba Umatshini wokuvelisa isichumiso se-BB Granules